Man City oo lacag dhan €120-150m ku raadinaysa goolwalaha AC Milan ee Gianluigi Donnarumma – Gool FM
Man City oo lacag dhan €120-150m ku raadinaysa goolwalaha AC Milan ee Gianluigi Donnarumma
(Manchester) 22 Maarso 2017 – Kooxda Manchester City ayaa doonaysa inay lacag fara badan oo u dhaxaysa €120-150m oo euro ku doonaysa goolwalaha AC Milan ee Gianluigi Donnarumma, sida ay warku sheegayo.
Sida uu baahiyay Sky Sport Italia, wiilkan 18-jirka ah ayay u arkaan ninka u bedeli lahaa Joe Hart oo bannaanka ka ah qorshaha Pep Guardiola, halka labada kale ee Claudio Bravo iyo Willy Caballero aysan ahayn dad la isku halleeyn karo.
Haddaba, iyadoo taa madaxa lagu hayo, ayuu bilyaneerka Sheikh Mansour ee iska leh Man C wuxuu doonayaa inuu lacag fara badan ku bixiyo laacibkan usoo baxaya Rossoneri.
Wax kasta waxay ku xirnaan doonaan iibka AC Milan, taasoo hakad haatan gelinaysa qorshihii ka wada hadalka qandaraaska Donnarumma maaddaama uu naadigu muquuranayo xaalad aan kala caddayn. Donnarumma ayaa shalay sheegay inuu doonayo inuu sii joogo AC Milan.
Angel Di Maria oo ku fikiraya inuu dib ugu laabto Real Madrid